November 2021 - ပညာ ပါဝါ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဘုရားဌာပနာထဲမှာ တန်ဖိုးကြီး ရတနာတွေ ထည့်သွင်းထားရခြင်း အကြောင်းအရင်း – ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ
Too Far | 30/11/2021
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဘုရားဌာပနာထဲမှာ တန်ဖိုးကြီး ရတနာတွေ ထည့်သွင်းထားရခြင်း အကြောင်းအရင်း – ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ဘုရားထဲမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေ ဘာလို့ ထည့်သွင်းထားတာတုန်း။ တစ်ချို့လည်းပဲ စဉ်းစားချင်မှ စဉ်းစားမှာ။ ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာတယ်။ ဌာပနာဆိုတာ…ထည့်သွင်းတာ၊ ထည့်သွင်းခြင်း တည်ထားခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရတနာတွေ ဘာကိစ္စ ဘုရားထဲမှာ ထည့်ကြတာတုန်း။
လှည်းကူးမြို့ ပြည်တော်သာ ၁၀လမ်းမှတွင် ပထမဆုံး ၆၀၀ ကျပ်တန် ဇလုံထမင်းဆိုင်ပေါ်လာ
လှည်းကူးမြို့ ပြည်တော်သာ ၁၀လမ်းမှတွင် ပထမဆုံး ၆၀၀ ကျပ်တန် ဇလုံထမင်းဆိုင်ပေါ်လာ လတ်တလောမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၅၀၀ ကျပ်တန်ထမင်းဆိုင်များအသီးသီးထွက်ပေါ်လာခဲ့သလို ယခုအခါ လှည်းကူးမြို့မှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ၆၀၀ ကျပ်တန် ဇလုံထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ လှည်းကူးမြို့နယ် ပြည်တော်သာရပ်ကွက် ပြည်တော်သာ ၁၀လမ်းမှာ ၆၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်တဲ့ ဇလုံထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ လှည်းကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာ လူတန်းစားအားလုံးအတွက်
အရေးမပါတဲ့ ဆယ်လီသတင်းတွေ ခနရပ်ပြီး အမေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးကြဖို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ညီမလေး ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
အရေးမပါတဲ့ ဆယ်လီသတင်းတွေ ခနရပ်ပြီး အမေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးကြဖို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ညီမလေး ( ဗီဒီယိုဖိုင် ) အရေးမပါတဲ့ ဆယ်လီသတင်းတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ပြီး အမေ့ကို သတိမရတဲ့ သူတွေကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက် အရေးမပါတဲ့ ဆယ်လီသတင်းတွေ ခနရပ်ပြီး အမေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးကြဖို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ညီမလေး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး
ပွဲစားများထည့်သည့် ဂျင်း နှင့် မြေကွက်ဝယ်ထားသူတွေ ကျူးဖြစ်သွားရခြင်း အကြောင်းအရင်း….
ပွဲစားများထည့်သည့် ဂျင်း နှင့် မြေကွက်ဝယ်ထားသူတွေ ကျူးဖြစ်သွားရခြင်း အကြောင်းအရင်း…. ရောင်းနေတုန်းက မပြောဘဲ ခြံစည်းရိုးခတ် အိမ်ဆောက်ပြီးမှ သစ်တောကြိုးဝိုင်းမြေဆိုတော့ ဆုံးရှုံးကြ တရားရင်ဆိုင်ကြရမှာပေါ့။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မေမြို့ထင်းကြိုးဝိုင်းအတွင်း ခွင့်ပြုချက်တစ်စုံ တစ်ရာမရှိဘဲ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်၍ ကျောက်တိုင်စိုက်/သွပ်ဆူးကြိုးကာရံခြင်း၊ အုတ်တံတိုင်းခတ်ကာရံ၍ အဆောက်အဦး အခိုင်အမာဆောက်လုပ်ထားခြင်းများ တွေ့ရှိရပြီး ကျူးကျော် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူများအား ဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေအရ
“မြန်မာစစ်ကောင်စီက ကျူးလွန်ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပြည်တွင်းပြဿနာ ရာဇဝတ်မှု့တွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာ စစ်ဆေးဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ “
“မြန်မာစစ်ကောင်စီက ကျူးလွန်ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပြည်တွင်းပြဿနာ ရာဇဝတ်မှု့တွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာ စစ်ဆေးဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ ” မြန်မာစစ်ကောင်စီက ကျူးလွန်ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပြည်တွင်းပြဿနာ ရာဇဝတ်မှု့တွေကို အာဂျင်တီးနားတရားရုံးက စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါပြီ ။ ဒီအမှု့ကို စတင်စစ်ဆေးတော့မှာပါ ။ အမှု့ကို လက်ခံလိုက်တာပါ ။ အာဂျင်တီးနားတရားရုံးဟာ သူ့သဘောနဲ့သူ လက်ခံခဲ့တာမဟုတ်ပဲ ကုလသမဂ္ဂက ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ
” WHO ကကြေညာပြီ “
” WHO ကကြေညာပြီ ” * WHO says Omicron poses very high global risk, world must prepare * Still unclear if variant causes more severe disease * Biden says
ရန်ကုန်မြို့မှာ ၄ဆိုင်မြောက် ၅၀၀ကျပ်တန် ထမင်းဆိုင် ထပ်မံ ပေါ်ပေါက် လာ ( ကျွန်မတို့လို့ လူ တွေအတွက် ထမင်းတစ်နပ်စားဖို့ရာ အဆင်ပြေခဲ့ပြီဆိုရင်ပဲ ကျေနပ်ပါပြီတဲ့…. )
ရန်ကုန်မြို့မှာ ၄ဆိုင်မြောက် ၅၀၀ကျပ်တန် ထမင်းဆိုင် ထပ်မံ ပေါ်ပေါက် လာ ( ကျွန်မတို့လို့ လူ တွေအတွက် ထမင်းတစ်နပ်စားဖို့ရာ အဆင်ပြေခဲ့ပြီဆိုရင်ပဲ ကျေနပ်ပါပြီတဲ့…. ) ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် ၊ဘုန်းကြီးကျောင်းကွေ့ မှတ်တိုင်အနီးမှာ နိုဝင်ဘာ ၂၅ရက်နေ့က စတင်ကာ ကြယ်စင်လင်း ၅၀၀ကျပ်တန် ပုံစား ထမင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ “ကျွန်မတို့ရဲ့ မိသားစုက
တကမ္ဘာလုံးကပါစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည့် ကိုဗစ်ဗီဇမျိုးကွဲစိပ် Omicron အတွက်နောက်ဆုံး သိခွင့်ရသည့်သတင်းများ ကိုအရင်းတိုင်းဖေါက်သယ်ချပါရစေ………..
တကမ္ဘာလုံးကပါစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည့် ကိုဗစ်ဗီဇမျိုးကွဲစိပ် Omicron အတွက်နောက်ဆုံး သိခွင့်ရသည့်သတင်းများ ကိုအရင်းတိုင်းဖေါက်သယ်ချပါရစေ……….. virus ပိုးကိုမွေး၍လေ့လာနေကြသောတောင်အာဖရိကနိုင်ငံဇီဝဓါတ်ခွဲခန်းမှကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးအဆိုအရ ယင်းမျိုးစိပ်ကွဲသည်ကူးစက်နှုံးမြန်သည်မှန်သော်လည်းရောဂါကူးစက်ခံရသူတို့အနေနှင့်ရောဂါ၏ဝေဒနါများကိုပြင်းထန်စွာခံစားရခြင်းမရှိပါ အနည်းငယ်ဖျားနာ၍မကြာမှီသက် သာပျောက်ကင်းကြသည်သာများပါသည် ထို့ကြောင့်အလွန်အမင်းထိပ်လန့်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ ဟုပြောပါသည်။ Omicron မျိုးစိပ်ကွဲပေါ်ထွန်းလာသည်ကလည်းစတင်ဖြစ်ပေါ်ရာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၌ပင်လျင်အချိန်အားဖြင့် ၂ ပတ်သာရှိပါသေးသည်။ အခြားနိုင်ငံမျာအနေနှင့်လည်းယင်းမျိုးစိပ်ကွဲအသစ်ကူးစက်ခံရပြီန်င်ငံတွင်းသို့ခရီးသွားဝင်ရောက်လာသူ များကိုရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ဆဲအဆင့်တွင်သာရှိသေးသဖြင့်ယင်းအချက်အပေါ်တွင်ဆန်းစစ်ချက်မပြုနိုင်ကြသေးပါ။ သို့သော်နိုင်ငံအတော်များများမှအစိုးကများအနေဖြင့် alpha နှင့် delta တို့ထွက်ပေါ်လာချိန်တွင်အချိန်မှီတားဆီးပိတ်ပင်ဟန့်တားမှုများမလုပ်ဆောင်ခဲ့ မိသဖြင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြသည်များကိုနမူနာယူ၍ယခုတကြိမ်တွင်ပြတ်ပြတ်သားသားဟန့်တားပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်တရှိန်ထိုးလုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။ ကူးစက်နှုံးမြန်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုလည်း ယနေ့ပိုးတွေ့သူများပျံ့နှံ့ရောက်ရှိနေသည့်နိုင်ငံအရေအတွက်ကသက်သေခံနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်အတိုချုံးရပါလျှင်အလွန်တရာစိုးရိမ်ကြောက်လန်
ျမန္မာပလာဇာ(Myanmar Plaza)မွာ ဆိုင္ရွင္ေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖိအားေပး
Too Far | 29/11/2021
ျမန္မာပလာဇာ(Myanmar Plaza)မွာ ဆိုင္ရွင္ေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖိအားေပး ျမန္မာပလာဇာ(Myanmar Plaza)မွာ ဆိုင္ေတြမထြက္ၾကတာ၊ ျမန္မာပလာဇာနဲ႔ မပတ္သက္ေတာ့ေၾကာင္း ဆိုင္ရွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လူမႈမီဒီယာမွာ စာေတြ ေရးတင္ၾကတာ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအဆင့္က ဖိအားေပးတာေတြ စလုပ္ေနၿပီလို႔ ျမန္မာပလာဇာဆိုင္ရွင္မ်ား အသိုင္းအဝိုင္းကေျပာဆိုေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာပလာဇာအတြင္းပိုင္းကို
၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့ ယနေ့အတွက် ပြည်တွင်း ရွှေဈေး၊ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့ ယနေ့အတွက် ပြည်တွင်း ရွှေဈေး၊ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့ ယနေ့အတွက် ပြည်တွင်း ရွှေဈေး၊ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်း ၁၆ ပဲရည်အခေါက်ရွှေ တကျပ်သား အတွက် 1780000 ကျပ် အဖွင့်ဈေးရှိပြီး ၁၅ ပဲရည်ပြည့်စပ်ရွှေ